Ady & Fifandirana · Oktobra, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Ady & Fifandirana · Oktobra, 2013
Tantara mikasika ny Ady & Fifandirana tamin'ny Oktobra, 2013
Saodiana 16 Taona Miady Ao Syria
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana07 Oktobra 2013
Tao amin'ny Twitter, nidera ny zanany lahy 16 taona ilay Saodiana Reema al-Jourish, satria nanatevin-daharana ireo Jihadista ao Syria izy. Naneho hevitra momba izany ireo mpiserasera
“Faly Amin'ny Fanohizan'i Assad Ny Famonoana ireo Siriana izao Tontolo izao”
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana06 Oktobra 2013
Nanaiky ny hametraka ireo fitaovam-piadiana simikany ho eo ambany fifehezana iraisam-pirenena i Syria. Milaza ireo mafana fo fa hanome fotoana an'i Assad hanohy ny famonoany vahoaka miaraka amin'ireo fitovam-piadina hafa eo am-pelatànany izany.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana05 Oktobra 2013
"Lasa kivazivazy ny fahamendrehan'ny olombelona. Tsy misy dikany ny lalàna iraisam-pirenena kanefa avoaka ao anaty boky ny teny foana sy tsy misy heriny, hoy ny lahatsoratr'ilay mpianatra ao Gaza Shahd Abu Salama, izay mihitsoka ao amin'ny sisintanin'i Rafah. "
Repoblikan'i Afrika Afovoany : “Aza Adinoina Izahay!”
Afrika Mainty03 Oktobra 2013
Niha-nahery vaika sady nanaitra ny fifandonana teo amin'ny governemantan'i Afrika Afovoany sy ireo mpikomy Seleka any amin'ny Repoblikan'i Afrika Afovoany hatramin'ny volana Desambra 2012. Mampahonena ny fari-piainan'ny olona any amin'ireo tanàna sasany, indrindra fa ireo ao anatin'ny firenena.
Ahoana Ny Fomba Hitantanan'i Lebanona Ny Firohotr'Ireo Mpitsoam-ponenana Syriana Marobe?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana02 Oktobra 2013
Mampiatrano mpitsoa-ponenana tokotokony ho iray tapitrisa i Libanona amin'izao fotoana izao - na tokotokony ho ampahaefatry ny mponina ao aminy. Indreto ny zavatra sasantsasany mihatra amin'izy ireo ao Libanona.
Pakistana :Resy Indray Ny Maha-Olona, Kristiana Maherin'ny 80 No Maty
Azia Atsimo01 Oktobra 2013
Mpametraka baomba mpanao vy very ny ainy niisa roa no nanapoaka ny tenany tamin'ny baomba tao anatin'ilay fiangonana 130 taona tany Peshawar taorian'ny fotoam-pivavahana Alahady ary nahafaty olona maherin'ny 80 sy nandratra olona maro.